समानान्तर Samanantar: September 2014
इन्द्रजात्रापछि काठमाडौंमा जात्राको लर्को सकिन्थ्यो। इन्द्रजात्रा अगिल्लै साता सकियो। तर, यो साता काठमाडौंमा एउटा नौलो जात्रा लाग्दै छ। यही भदौ ३१ गते 'सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलन’का नाममा जात्रा लाग्ने भएको छ। 'पाटनका ६ प्रधान’का नयाँ अवतारले आयोजना गर्ने यस जात्राको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले नै गर्ने रे! अर्थात् जत्रामा जनताको रगतपसिनाबाट जम्मा भएको राष्ट्रको ढुकुटीकै पैसा खर्च हुनेछ।
संविधान निर्माणका लागि जनताले दुईदुई पटकसम्म निर्वाचनमा भाग लिए। पहिलो संविधान सभामा अहिले राजनीतिक सम्मेलनका लागि मरिहत्ते गर्नेलगायत धेरैलाई जनताले छानेका थिए। तर, तिनले संविधान बनाएनन्। त्यसका लागि पहिलो संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा (माओवादी)लाई जनताले दोषी ठहर्या ए र दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई जनादेश दिए। दुर्भाग्य, संविधान बनाउनैका लागि जनादेश लिएको र पाएको भए पनि दुवै पटक दलका नेताको प्राथमिकता सत्ता, सत्ता र सत्तामात्र रह्यो। यसैले संविधान सभामा बसेर संविधान निर्माणका लागि छलफल गर्नुको साटो उनीहरूलाई कथित राजनीतिक सम्मेलन गर्न सजिलो लाग्यो। नेपालको राजनीतिमा धेरैजसो नायकको अभिनय गर्ने विदूषकहरू नै खलनायक हुँदैआएका छन्। यो सम्मेलन पनि त्यही शृंखलाको पछिल्लो कडीमात्रै हो।
नेपालको शाहकालीन इतिहास हत्या, षड्यन्त्र र धोकामात्र हैन मूर्खताको 'ठ्यासफु’ पनि हो। विक्रम संवत् २००० सालपछिका राजनीतिक घटनावली हेर्ने हो भने यो सम्मेलन पनि पुरानै धुर्त्याइँ र मूर्खताको निरन्तरता देखिन्छ। श्री ३ महाराज हुनेबित्तिकै पद्म शमशेरले भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको राप कम गर्नैलाई भए पनि केही सुधारको प्रयास गरेका थिए। उनलाई राणाहरूले नै अवरोध नगरेको भए २००७ सालमा सशस्त्र जनक्रान्ति गर्नैपर्ने थिएन कि? कम्तीमा जनक्रान्तिलगत्तै खुकुरी दल त जन्मने थिएन। प्रतिक्रान्तिको बीउ हो खुकुरी दल। अहिलेसम्म कुनै न कुनैरूपमा जीउँदै छ यो। संविधान सभाको तेजोबध गरेर जनप्रतिनिधिलाई भित्ता लगाउने दुष्प्रयास यही खुकुरी दलकै निरन्तरता त हो ।
क्रान्तिबाट जनताले हासिल गरेको उपलब्धि खोस्ने कार्य प्रतिक्रान्ति हो। जनक्रान्तिको मूल उपलब्धि 'जननिर्वाचित सभा’ले बनाएको विधानअनुसार शासन चलाउने सहमति थियो। अहिलेसम्म त्यो पूरा भएको छैन। राजाले सधैँ जनताको अधिकार खोसिरहे। राजतन्त्र सकिएपछि जनताका अधिकार खोस्न नेताहरूका आँगमा राजतन्त्रको वायु चड्यो। जनताले संविधान बनाउनै भनेर प्रतिनिधि छाने तर निर्वाचित प्रतिनिधिको तेजोबध गर्ने प्रयास चुनाव नहुँदै थालियो। यही त हो प्रतिक्रान्ति।
विसं २००७—१५ का बीचमा निर्वाचन टार्न टंकप्रसाद आचार्य, डिल्लीरमण रेग्मीजस्ता नेताले राजालाई नसघाएका भए चुनाव हुनैका लागि ८ वर्ष लाग्ने थिएन। राजा महेन्द्रले ठूला दलको तेजोबध गर्न राजनीतिक सम्मेलनमा नाममा मरणघाट व्यवस्थापन संस्थासमेतलाई सहभागी गराउँथे रे। आचार्य, रेग्मीलगायतका नेताले राजाको त्यस्तो धुत्याइँको समर्थन गर्दा जनताले तिनलाई राजाका कठपुलती ठाने। फलस्वरूप, चुनावमा तिनको लाजमर्दो पराजय भयो र नेपाल प्रजा परिषद्जस्तो गौरवशाली इतिहास भएको दलसमेत समयक्रममा बिलाएर गयो। छवि नबिग्रँदै चुनाव भएको भए सायद यिनको अस्तित्व यसरी लोप हुनेथिएन।
पञ्चायत कालमा पनि यस्ता घटना भएका छन्। भनिन्छ, २०३२ सालमा संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गर्दा राजा २०३७ को जस्तो संविधान बनाउने मनःस्थितिमा थिए। तर, भारतमा संकटकाल लाग्नेबित्तिकै यता खुकुरी दलका मानसपुत्रहरू जागे। अन्ततः २०३६ मा जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गर्नुपर्योत। जनमत संग्रहको घोषणापछि पनि पञ्चायतभित्रकै केही नेताले सोझै दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने माग गरेका थिए। श्रीभद्र शर्माको अगुवाइमा राष्ट्रिय पञ्चायतका केही सदस्यले गरेको यो माग राजाले मानेका सम्भवतः नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको बाटो अपेक्षाकृत सहज हुनेथियो। राजाले मानेनन् २०४६ सालमा लोकतन्त्रीकरणको लगाम उनको हातबाट फुस्क्यो।
शीतयुद्ध त्यति चाँडै र त्यसरी अन्त्य होला भन्ने कल्पना सायद मिखाइल गोर्भाचोवलेसमेत गरेका थिएनन्। सोभियत साम्राज्यको त्यति चाँडै पतन हुन्छ भन्ने थाहा पाएका भए पक्कै पनि बीपी कोइरालाको स्वदेश आगमनको विरोध चार वरिष्ठले गर्ने थिएनन्। (टंकप्रसाद आचार्य, डिल्लीरमण रेग्मी, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, केशरजंग रायमाझीले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको कडा आलोचना गरेर वक्तव्य दिएका थिए। त्यसलाई उतिबेला 'चार वरिष्ठको वक्तव्य’ भनिन्थ्यो।) त्यसो त राजाको मूर्खता र हठ पनि प्रमुख कारण थियो पहिलो जनआन्दोलनको तर शीतयुद्धको समाप्तिले संयुक्त आन्दोलन सम्भव भयो। कम्युनिस्टसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णयका लागि कांग्रेसका नेताहरूले जस पाए तर उनीहरूलाई समयले निर्देशित गरेको थियो। शीतयुद्ध चलिरहेको भए कम्युनिस्टभित्रै र कांग्रेसमा पनि अमेरिकी र रुस समर्थक (नेपालका सन्दर्भमा भारत र चीन समर्थक) संयुक्त आन्दोलनका लागि तयार हुने थिएनन्।
जनआन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। उनले पद बहाली गर्दा नगर्दै खुकुरी दलका मानसपुत्र विभिन्नरूपमा चर्को कम्युनिस्टदेखि जर्नेली आवरण सक्रिय भइसकेका थिए। किसुनजीले बुद्धि पुर्यािएर परिवर्तनलाई 'क्रान्ति र निरन्तरता’ नभनेका भए समस्या चर्कन सक्थ्यो। शक्ति गुमाएका राजाले माओवादीलाई आफ्ना हितैषी ठानेर 'अघोषित कार्यगत एकता’ नगरेका भए सम्भवतः राजसंस्था त्यसरी समाप्त हुने पनि थिएन। संविधानका मूल धारालाई 'असंशोधनीय’ नबनाएको भए राजतन्त्रबारे २०६३ मै जनमत गर्न सकिन्थ्यो। तत्कालीन ७ दलका नेताले टुँडिखेलबाट माओवादीलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्दा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई उक्साएर भाँजो नहालेका भए कम्तीमा 'बाह्र बुँदे’ सम्झौता गर्न दिल्ली पुग्नुपर्ने थिएन। दिल्लीलाई मध्यस्थ नबनाएको भए सायद भारतलाई 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा नलाग्न बिन्तीभाउ गर्नुपर्ने पनि थिएन।
मधेसीहरूले सुरुमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता खोजेका थिए। त्यसलाई उपेक्षा नगरिएको भए संघीयतामा क्रमिकरूपमा जान सकिन्थ्यो। सर्वशक्तिशाली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मधेस आन्दोलनको सुरुमै नागरिक समाजका केही व्यक्तिले 'अन्याय नगर्न’ सल्लाह दिएका थिए। माओवादीको हातबाट मारिएका युवकको शव माओवादीकै नेताले लुटेर लैजाँदा पनि प्रधानमन्त्री कोइराला न्यायका लागि तयार भएनन्। न्याय गर्नमात्र तयार भएको सायद पछि सरकारले त्यसरी घुँडा टेक्नुपर्ने थिएन र उनको प्रथम राष्ट्रपति हुने इच्छा पनि अपूरो रहने थिएन।
पहिलो संविधान सभामा सदन र सडक दुवैतिर एकछत्र राज गर्न खोज्दा पुष्पकमल दाहाल विफल भए। अहिले पनि उनले त्यही बाटो पछ्याइरहेका छन्। दाहाल एकातिर संविधान सभाभित्र जातीय संघीयताका लागि मोर्चाबन्दी गर्छन्। अर्कातिर संविधान सभालाई स्वीकारै नगर्ने समूहको नेतृत्व गर्ने रहर पनि गर्छन्। उनलाई सत्ता सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको नेता पनि हुनु छ। चुनावमा वैद्य माओवादी आउला भनेर पहिले दाहालले नै जाल गरे। अहिले उनलाई वैद्यहरूबिना संविधान बनाउनै नहुने तत्वबोध भयो। निर्वाचित संविधान सभाको तेजोबध गरेर दाहाल सायद जनतासँग हारको बदला लिन चाहन्छन्। तर, यस्तो प्रयास इतिहासमा जजसले गरे त्यो तिनैका लागि आत्मघाती सिद्ध भएको छ। राजनीतिक सम्मेलन वैद्य माओवादीलगायतका संविधान सभाबाहिरको समूहको तुष्टीकरणका लागि मात्र हो भने त्यसले मुलुकलाई ठूलो क्षति नगर्ला तर त्यसलाई संविधान सभाको समानान्तर स्थापित गर्न खोजियो भने नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा त्यो कालो घटना सिद्ध हुनेछ। अहिले तेजोबध गर्न लागिएको त्यही संविधान सभाले स्वीकार गरेमात्र सम्मेलनका निर्णयहरू वैध र सार्थक हुने ययार्थ सबैले सधैँ हेक्का राख्नुपर्छ। समाचारअनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनको निर्णय संविधान सभामा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ रे। त्यति त बुद्धि पुर्यानएछन् तर त्यही निर्णयले पनि सम्मेलनको औचित्यमा प्रश्न उठ्छ।
अब भइसकेका गल्ती मेट्न सकिँदैन। त्यसैले बुद्धि पुर्या्एर देशप्रति इमानदार भई सबै ध्यान संविधान निर्माणमा लगाउनुपर्छ। कुनै विषयमा सहमति हुनै नसके दलीय ह्विप जारी नगरीकन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर संविधानका गाँठा फुकाए हुन्छ। केही सीप नलागे जनमत संग्रह गरेरै विवाद टुंगो लगाए पनि हुन्छ तर टुंगो चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाटै लगाउनुपर्छ। संक्रमणकाल लम्मिदैजाँदा गलत प्रवृत्ति र परम्पराको पनि संक्रमण बढ्ँदै जो जान्छ। भारतीय हस्तक्षेपको जोखिम कम भएका बेला चीन र पश्चिमको चासो पनि कम हुन्छ। अहिले देशभित्र सहज र स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्ने वातावरण छ। मौका पाएका बेला दन्तबझानमा समय खेर फाल्ने हो भने पछि पछुतो गरेर बस्नुपर्नेछ। लोकतन्त्रीकरण विकास प्रक्रिया हो। विकास फूल फुले जसरी हुन्छ बिस्तारै फक्रँदै जाने। अहिले बाटो खोलौँ, पूर्णता नखोजौँ। पूर्ण केही पनि हुँदैन। पूर्णतातर्फको यात्रा जारी राखौँ। नत्र, यो कालखण्ड नै इतिहासमा एउटा जात्रामात्र सिद्ध हुनेछ। हुन त, ज्ञानीहरू संसारलाई नै जात्रा भन्छन् र रंगमञ्च ठान्छन्।
Posted by Govinda at 9/16/2014 06:21:00 AM No comments:
नेपालको राजनीति र साहित्य दुवैतिर उत्तिकै उच्च स्थानमा रहेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको शत वार्षिकी मनाइँदै छ। सम्भवतः देशभित्र सबैभन्दा धेरै समर्थन, विरोध र चर्चा भएका र विदेशमा सम्मान गरिएका नेपाली हुन् बीपी।
त्यस क्रममा धेरैले उनलाई राजनीतिमा लोकतान्त्रिक समाजवादी, साहित्यमा यौन मनोविश्लेषणका प्रयोक्ताका रूपमा चिन्ने र चिनाउने गरेका छन्। बीपी भने राजनीतिमा मूलतः मानवतावादी हुन् र 'त्रू्कर पुँजीवाद’ विरोधी हुन्। उत्तरार्धमा बीपीको विचारमा स्पष्ट देखिएको उपभोक्ता संस्कृतिप्रतिको असहमतिले उनलाई पर्यावरणवादी अर्थात् 'ग्रिन’ पनि बनाएको छ। उनकोे चिन्तनको यस पक्षको भने खासै चर्चा भएको छैन।
बीपीलाई बुझ्न सजिलो हुने केही पंक्ति तल उद्धृत गरिएको छ।
• 'हामीले विकासको पश्चिमी ढाँचा अनुकरण गर्दा खेरी धनी झन् झन् धनी र गरिब झन् झन् गरिब हुँदैगइरहेका छन्। यो सम्पन्न वर्गको जरा (आधार) यस देशमा छैन। त्यो वर्गलाई यो देशको आर्थिक पुनरुत्थानमा खास रुचि पनि छैन। ’
• 'हामीहरू के चाहन्छौँ भने 'पोलिसी’ बनाउने कुरामा पनि जनता सम्मिलित हुनुपर्छ र त्यो 'पोलीसी इम्प्लिमेन्ट’ (कार्यान्वयन) बखतमा पनि जनताको सहभागिता हुनुपर्छ। अनिमात्र विकास हुन्छ।’
• 'हामीहरूको आर्थिक सामर्थ्य के छ? हाम्रा विद्यमान आर्थिक साधन के छन् जसलाई जग बनाएर विकासको पहिलो इँट राख्न सकिन्छ? हामीसँग उर्वर जमिन छ। श्रमशक्ति, जना, नदी, नाला प्रशस्त छन्। वन जंगल छ। पुँजीको भने ठूलो अभाव छ। विकासको कार्यक्रम बनाउँदा यी साधन र अभावलाई बिर्सन पाइन्न। विकासको लक्ष्य के त? भन्दा प्रत्येक नेपालीलाई खान, लाउन, बस्न घर, केटाकेटी पढ्ने र ओखतीमुलोको व्यवस्था गराउने हो। ’
• 'नेपालका लागि गरिबी भन्नु पनि गाउँमै छ। गाउँ र गाउँलेको अवस्थाबारे तपार्इँलाई केही थाहा छैन भने गरिबीको समस्या बुझ्नेपट्टि पाइलो सार्न पनि सक्नुहुन्न। बडो उत्कृष्ट एवं जटिल प्रविधि भएका विकसित देशहरूबाट विकासको धारणा आयात गर्नु नै हाम्रा योजनाविद्हरूको गल्ती हो। ’
( विकाससम्बन्धी विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका यी सबै उद्धरण बलदेव मजगैयाँको सम्पादनमा प्रकाशित 'बीपी कोइराला विचार विन्दु, २०४७’बाट लिइएको हो। पुस्तकमा कुनै उद्धरण सन्दर्भसहित र कुनै उद्धरणमात्र पनि दिइएकाले यहाँ उद्धृतमात्र गरिएको छ।)
दुर्भाग्य, ' विकसित देशहरूबाट विकासको धारणा आयात गर्ने ' गल्ती २०४६ पछि पनि गरियो र २०६३ पछि समेत त्यसैलाई निरन्तरता दिइयो। फलस्वरूप, मुलुक विद्यार्थी र बिरामीसँग कर उठाएर ढुकुटी भर्ने र राजनीति, प्रशासन र अरू क्षेत्रका ठालुलाई पोस्ने विकृत पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको भारसमा फस्यो। नेपालले अहिले अपनाएको आर्थिक विचार पुँजीवादी हो। हुनत, उदारवादी राज्य व्यवस्था भएका मुलुकमा लगभग सबैतिर बजार अर्थतन्त्र भएकाले पुँजीवाद र उदारवादलाई पर्याय ठान्नेहरू पनि छन् तर पुँजीवाद समाजवादको सहोदर हो। उदारवादी राज्यमा त बजारको त्रू्करताबाट कमजोरलाई जोगाउने विधि र संयन्त्र हुन्छ। राज्यले जनतालाई सबै प्रकारका शक्तिशालीको थिचोमिचोबाट संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ।
बीपीका अर्थतन्त्र र विकाससम्बन्धी विशेषगरी पछिल्ला कालखण्डका विचार र अवधारणाको अनुशीलन गर्दा राज्यले कमजोर नागरिकको न्यूनतम आवश्यकताको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता रहेको स्पष्टै बुझिन्छ। यही मान्यतालाई समाजवाद भन्ने हो भने बीपीलाई समाजवादी भन्न सकिन्छ। तर, समाजवादका आधारभूत पक्षहरू भौतिकवादी दृष्टिकोण र प्राकृतिक साधनस्रोतको दोहनप्रति भने बीपीको चर्को विमति छ। समाजवादीहरू मानवेतर सबै प्राणी र वस्तुको शोषण एवं दोहन गरेर पनि समाजलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। तर, पछिल्लो कालखण्डका विचार हेर्दा बीपी समाजवादीभन्दा बढी 'ग्रिन’ देखिन्छन्। उनका समाजवादी मित्र विली ब्रान्टले प्रशंसा र उद्धृत गरेको बीपीको विकास अवधारणा पनि दिगो विकाससम्बन्धी नै हो।
समाजवाद अपेक्षाकृत पश्चिमी र वर्गमा आधारित भौतिकवादी चिन्तन हो। बीपीमा पछिल्लो कालखण्डमा 'बसुधैव कुटुम्बकम्’ प्रकृतिको आध्यात्मिकता देखिएको छ। 'ठूलो हैन असल’ भन्ने उनको मान्यता भौतिकवादी होइन। यस्तै हेनरी फोर्डको विकास प्रारूपको अस्वीकृतिको वैचारिक पक्ष पश्चिमको 'उपभोक्ता संस्कृति’प्रतिको असहमति हो। बरु, पूर्वीय चिन्तनमा वैदिक युगसँग जोडिने र अहिले पश्चिममा बिस्तारै राजनीतिक विचारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको प्रकृति र मानवतावादी 'बाँचौ र बाँच्न दिऊँ' भन्ने विचार व्यक्ति र प्रकृतिमाथि राज्य र पुँजीपतिको शोषणविरुद्ध पनि छ। बीपीले आजभन्दा करिब ५० वर्ष पहिले नै यस्तो धारणा प्रकट गरेका छन्। सशस्त्र आन्दोलन पूर्व नै पनि उनमा 'दिगो मानवीय विकास’को धारणा उत्पन्न भएको पाइन्छ 'जेल जर्नल'का कतिपय पंक्तिमा। थोरै जनसंख्याले धेरै साधनस्रोतको उपभोग गर्ने उपभोक्तावादी ढाँचा अर्थात् बीपीका शब्दमा 'हेनरी फोर्ड नमुना’को विरोध उनले सैद्धान्तिक आधारमै गरेका हुन्। त्यसको स्पष्ट अर्थ हुन्छ, अहिले नेपालले अपनाएको चरम उपभोक्तावादी बजार अर्थतन्त्रको पनि बीपीले विरोध गर्ने थिए। उनले उपभोक्तावादी पुँजीवाद विरोधी यो विचार सन् १९८१ मै अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा व्यक्त गरेका थिए।
कार्ल मार्क्स र अरू धेरै समाजवादीको ध्यान गरिबीको कारण र त्यसबाट मुक्तिको उपाय खोज्नमा भन्दा धनी हुनुको कारण र तिनको धन खोस्ने उपायमा बढी केन्द्रित छ। बीपीको ध्यान भने गरिबलाई सम्मानपूर्ण जीवन यापन गर्न सक्षम बनाउनेमा केन्द्रित छ। यो वास्तवमा बेलायतमा उदारवादीहरूले अठारौं शताब्दीमा थालेको सुधारकै अंग थियो। विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर सबैलाई समानरूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने त्यस सुधारको मूल ध्येय थियो। त्यसका लागि राज्यको दायित्व र भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पछि 'समाजवादी’ भन्न थालियो। त्यो मूलतः उदारवादी चिन्तन हो।
बीपीका छरिएका विचारका आधारमा विकासको खाका कोर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ, बजारमा राज्य, पुँजीपति वा श्रमिक कसैको पनि एकहट्ठी (एकाधिकार) हुनुहुँदैन, 'जग्गा हुन्छ जोत्नेको' अर्थात् खेती गर्नेले जमिनको स्वामित्व पाउनुपर्छ, उत्पादन र सेवा उद्योग श्रम प्रधान र वातावरणमैत्री हुनुपर्छ, भारवहन क्षमताअनुसार मात्र प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोग गर्नुपर्छ भन्न सकिन्छ। (विशेषगरी सन् १९७० को दशकको उत्तरार्धमा विश्वको ध्यान वातावरणको भारवहन क्षमतातिर गएको हो। यही बेलातिर संयुक्त राष्ट्रसंघले ब्रान्ट कमिसन, ब्रुन्टल्यान्ड कमिसनजस्ता विश्वस्तरीय समिति बनाएर अध्ययन गराएको थियो। बीपीले यी अध्ययनहरूको प्रतिवेदन हेर्न त भ्याएनन् तर लाग्छ, यिनको निष्कर्ष बीपीले पहिल्यै बुझेका थिए। बीपीले अहिलेको 'दिगो विकास’ शब्द नै त सायद प्रयोग गरेका छैनन् तर धेरै पहिले नै बीपीले त्यस अवधारणालाई अघि सारेका थिए। ब्रान्टले बीपीको त्यही विचार एउटा समाजवादी सम्मेलनमा उद्धृत गरेका छन्।)
बीपीलाई उनका विकाससम्बन्धी वैकल्पिक चिन्तनका आधारमा हेर्नुपर्छ। विकासको चिन्तन धेरै आर्थिक चिन्तकले प्रस्तुत गरेका छन् तर बीपीले राजनीतिक नेताका रूपमा विकासलाई नयाँ अर्थ दिए। यसैले बीपीले विकल्प दिन सकेका हुन्। परिवार केन्द्री, गुजारामूलक, नेपालका हकमा किसानमुखी, दिगो र आत्मनिर्भर विकास उनको चिन्तनको सार हो। ( बीपीले कल्पना गरेको गुजारा भने हातमुख जोड्ने प्रकृतिको नभएर 'दूधभात खान, छोराछोरी पढाउन, ओखतीमुलो गर्न ऋण लिनु नपर्ने अर्थात् मध्यमवर्गीय परिवारको स्तरको हो।) यसलाई 'समाजवाद’ भन्ने हो बीपी समाजवादी हुन्। अरू विकास प्रणाली व्यक्ति वा राज्य केन्द्री छन् भने बीपीले परिवारकेन्द्री विकास ढाँचा अगाडि सारेका छन्। बीपी समृद्धिको साटो गुजारा रोज्छन् र परिवार आत्मनिर्भर हुने विकासका पक्षमा देखिन्छन्। अर्थात्, बीपीको विकास चिन्तनको केन्द्रमा समृद्धि हैन स्वतन्त्रता छ। विडम्बना, बीपीको विकास चिन्तनमा 'भविष्यमुखी’ विकल्प मान्न सकिने यस पक्षको भने चर्चै हुनसकेको छैन। उनको शतवार्षिकी पनि सायद सतहमै अलमलियो।
Posted by Govinda at 9/09/2014 07:08:00 PM No comments:
संविधान सभाबाहिर संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्ने हो भने संविधान सभाको औचित्य समाप्त हुन्छ । जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पन्छाएर केही राजनीतिक ठालुहरूले निर्णय गर्ने प्रयास लाेकतान्त्रिक हुन सक्तैन ।
अहिले नेकपा - माओवादीलाई सहभागी गराएरमात्र संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने पुष्पकमल दाहालकाे नियतमै खोट छ । राजाका प्यादाहरू पनि संविधान सभाबाहिर सहमति हुनुपर्छ भन्दैछन् । राजतन्त्र हटाउने पहिलो संविधान सभाको निर्णय प्रक्रियासम्मत भएन भन्नेहरू नै अहिले बैद्य माओवादीबिना संविधान निर्माण गर्नुहुन्न भन्दैछन् । बैद्यका कुरा सुन्नु र उिचत भए मान्नु पनि पर्छ तर बैद्यबिना संविधान बनाउनु हुन्न भन्नु चाहिँ जनविरोधी षड्यन्त्र हो। चुनावका बेला वैद्य माओवालीले भाग नलिओस् भनेर षड्यन्त्र गर्ने प्रचण्डले नै अहिले बैद्यबिना संविधान बन्दैन भन्नुले पनि यी ठालुतन्त्रका पोष्य पुत्रहरूको नियतमा सन्देह बढाएको हो।
क. षड्यन्त्र गहिरो छ भने यिनीहरू मुलुकलाई अराजकताको भुमरीमा पारेर विदेशी हस्तक्षेपका लागि वातावरण बनाउने प्यादाका रूपमा प्रयोग भएका हुन्। चरम दक्षिणपन्थी र उग्र कम्युिनस्टहरू दुवैको यो साझा मिसन हुनसक्छ।
ख. नर्वाचनमा पराजित अधिनायकतावादी र साम्प्रदाियक तत्वले बैद्यलाई िमसाउन पाए शक्ति बढ्ने ठानेर पनि अहिले संविधान सभाबाहिर निर्णय गर्नुपर्ने धारणा अगाडि सारेका हुनसक्छ ।
ग. यति ठूलो षड्यन्त्र छैन भने संविधान सभामा केही समय यता बाबुराम भट्टराईले देखाएका सुझबुझबाट संविधान बन्याे भने उनले जस िलने भए भनेर डाहाले प्रचण्डले यो नौटंकी गरेको हुन पनि सक्छ ।
कांग्रेस र एमालेका नेता यस्ता बेला धेरै प्रचण्डको जालमा पर्ने गरेका छन्। ठालुतन्त्र चलाउन उनीहरू पनि रमाउँछन् । लोकतन्त्रप्रति यिनको प्रतिबद्धता सन्देहरहित छैन । यिनले जनतालाई धोका दिँदैनन् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन ।
अब युवा सभासद्ले प्रक्रिया अपनाएर पनि संविधान बनाउँछौँ भन्ने अडान देखाउन सकेनन् भने मुलुकमा लाेकतन्त्रमात्र हैन राष्ट्रियता नै संकटमा पर्नेछ । केही विषयमा सहमति हुन सक्तै नसके जनमत संग्रह गरेर निर्णय गरे पनि हुन्छ । तर निर्णय चाहिँ संविधान सभासद्बाटै हुनुपर्छ । नत्र मुलुकको प्रगति र लोकतन्त्रको बाटोमा तगारो लाग्नेछ । लाेकतन्त्र र मुलुकको माया गर्ने सभासद्ले आह्वान गरेभने जनता पुनः सडकमा उत्रनसक्छन् ।
Posted by Govinda at 9/02/2014 01:03:00 PM No comments:
'विवस्त्र’ नेपाली भाषामा खासै प्रयोग नभएको संस्कृत शब्द हो। नेपाली बृहत् शब्दकोशमा यस विशेषणलाई स्वतन्त्ररूपमा नराखी 'विवसन/विवस्त्र’ लेखिएको छ।
यसको अर्थ चाहिँ 'शरीरमा कुनै किसिमको वस्त्र नभएको, लुगा नलाएको, नाङ्गो, दिगम्बर’ भनेर दिइएको छ। नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसीबाट प्रकाशित संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर’ पनि यसको अर्थमा 'नग्न, नंगा’ उल्लेख भएको छ। अर्थात्, विवस्त्र शब्दको अभिधा अर्थ 'नांगो’ हो। 'सम्राट्’शब्दको अर्थ त ठूलो राजा वा बादसाह भन्ने नै हो। सम्राट् कहलिन राजाहरूको राजा हुनुपर्छ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफ्नो साहित्यिक मान्यता प्रकट गर्ने क्रममा 'साहित्य’मा 'सम्राट्’ पनि 'विवस्त्र’ हुन्छ भनेका छन्। यसको सामान्य अर्थ त साहित्यमा सम्राट् पनि नाङ्गै हुन्छ भन्ने नै हो। उनले प्रयोग गरेको यो विवस्त्र अर्थात् 'नाङ्गो’ शब्दको व्यञ्जनात्मक अर्थ भने 'लुगा नलगाएको जन्मजात अवस्था’ मात्रैले धान्दैन। सायद, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी)ले आवरण, आडम्बर र आलम्बन विहीन भन्ने अर्थमा 'विवस्त्र' शब्द प्रयोग गरेका हुन्। साहित्यमा बीपीको व्यक्तित्व आडम्बर, आवरण र आलम्बनबिना प्रकट भएको छ। अर्थात् विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आफैँ नै नेपाली साहित्यमा 'विवस्त्र’ प्रकट भएका छन्। राजनीतिक व्यक्तित्व वा सम्भ्रान्त पारिवारिक पृष्ठभूमिको मर्यादाले बीपीका अभिव्यक्तिलाई छोप्नसकेका छैनन्। नेपाली आख्यानमा उनका कमजोरीहरूसहितै पनि बीपीलाई 'सम्राट्’ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन। यसरी विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आफैँ नै नेपाली साहित्यका 'विवस्त्र सम्राट्’ सिद्ध हुन्छन्।
आधुनिक नेपाली साहित्य र बौद्धिकतामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको विशिष्ट स्थान छ। उनका राजनीतिक विरोधी र आलोचकसमेत नेपाली साहित्यमा बीपीको उच्च मूल्यांकन गर्छन् र उनीप्रति नतमस्तक हुन्छन्। हुन पनि राजनीतिमा मात्र हैन नेपाली समाजको आधुनिकीकरणमा पनि बीपीको भूमिका नेतृत्वदायी नै छ। बीपी नेपाली साहित्यमा मनोविश्लेषणको प्रयोग गर्ने अग्रणी स्रष्टामध्येका हुन्। त्यसमा पनि धेरैजना बीपीलाई नेपाली साहित्यमा यौन मनोविश्लेषणको प्रथम प्रयोक्ता नै मान्छन्। 'साहित्य मेरो क्षेत्र हैन’ भनेर पन्छे पनि र राजनीतिबाट फुर्सद पाएका बेलामा मात्र साहित्यतर्फ ध्यान दिएका भए पनि नेपाली मनोविश्लेषणात्मक कथा र उपन्यासमा उनलाई अरूले उछिन्न सकेका छैनन्। उनका आत्मकथात्मक कृतिहरूको साहित्यिक मूल्यमा विवाद होला। (कमल दीक्षितले त जेल जर्नलको साहित्यिक मूल्यको पनि निकै सराहना गरेका छन्।) जे भए पनि तिनले नेपाली समाज र चिन्तनमा पारेको प्रभावका दृष्टिबाट भने अतुलनीय छन्। यसैले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई परम्परागत मूल्यांकनका आधारमै पनि नेपाली साहित्यका 'सम्राट्’ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन।
हुनत, व्यक्ति कोही पनि ठूलो र सानो नभएजस्तै सिर्जना पनि कुनै ठूलो र कुनै सानो हुँदैन। कुनै रचना कालजयी होला भने कुनै क्षणमै बिलाउला तर रचना त दुवै हुन्। इतिहासले छोपेको कतिपय व्यक्तित्व समाजमा पछि स्थापित भएजस्तै कलाका विभिन्न विधाका कतिपय रचनाले पनि कालान्तरमा संसारलाई चकित, मोहित र रोमाञ्चित गराएकै छन्। त्यसैले सिर्जनालाई कुनै कालखण्डकै प्रभाव र मनोगत मूल्यांकनका आधारमा ठूलो र सानो कसरी भन्नु र? सिर्जनाजस्तै स्रष्टालाई पनि साना र ठूला भन्न पक्कै मिलोइन। साहित्यमा कुनै पनि स्रष्टाको अर्को सर्जकसँग तुलना गर्नु मूर्खता हो। प्रत्येक स्रष्टाको परिवेश, चिन्तन र व्यक्तित्व अलग हुने हुनाले अनुकरण गर्न खोजेर पनि अर्कोजस्तै हुन कोही पनि सत्तै्कन। यसैले स्रष्टा सबै सम्राट् हुन्। कम्तीमा आआफ्नो वैयक्तिकताका सम्राट्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सुलोचना महाकाव्यमा प्रतिनिधि पात्रका मुखबाट भनेजस्तै — 'म आफ्नो घरको राजा झोपडी नै भए पनि।’
'विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपाली साहित्यमा मनोविश्लेषण विशेषगरी यौन मनोविश्लेषणका प्रथम प्रयोक्तामध्येका हुन्। उनका पात्रहरू जीवन्त छन्। उनको प्रभाव पछिल्ला साहित्यकारहरूमा परेको छ। उनका पात्रहरूमा अस्तित्ववादी प्रवृत्ति पाइन्छ। नेपाली साहित्यमा पश्चिमी साहित्यको प्रभाव भित्र्याउनेमध्ये पनि कोइराला अग्रणी स्रष्टा हुन्। ’ यी यस्तै असंख्य वाक्य बीपीको साहित्यिक योगदानको चर्चाका क्रममा लेखिएका छन्। उनका पात्र र प्रवृत्तिकै बारेमा पनि भइसकेकै चर्चा दोहोर्या उनुको कुनै तुक छैन। यस्तै उनले कहिलेदेखि लेख्न थाले? के लेखे? कति लेखे? जस्ता विवरण दोहोर्या उनु पनि पक्कै आवश्यक छैन। अब त रुचि हुने पाठकले इन्टरनेटमा खोजेरै पनि बीपीका बारेमा धेरै जान्नसक्छन्। उनका कृति बजारमा सजिलै र छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् भने बीपीको साहित्यिक योगदानमै विद्यावारिधि गर्नेको संख्या पनि थुप्रै भइसकेको छ। कतै अभिलेख छ छैन थाहा छैन तर नेपालीमध्ये साहित्यिक र राजनीतिक पक्षमा गरिएका प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान सायद बीपीकै बारेमा सबैभन्दा धेरै भएको हुनुपर्छ। यसैले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले दाबी गरेजस्तै उनी साहित्यमा 'अराजकतावादी’ नै हुन् त भन्ने प्रश्नमा चर्चा केन्द्रित गरौँ।
सामान्य अभिधात्मक अर्थमा अराजकता पक्कै पनि वाञ्छित अवस्था हैन। राजनीतिमा चाहिँ अराजकतावाद 'राज्यविहीन खुला र स्वशासित’ समाजको कामना हो। साहित्यमा पनि अराजकतावादले उन्मुक्तिको कामना त गर्छ नै तर केही हदसम्म यसमा अधियथार्थवादी प्रवत्ति पनि पाइन्छ। बीपी भने आफ्ना रचनामा प्रायः सामाजिक र वैयक्तिक मनोविज्ञानका प्रयोक्ता तथा फ्रायडका प्रवक्ता बनेका भेटिन्छन्। अधियथार्थ उनको प्राथमिक प्रवृत्ति बनेको छैन। बरु, सामाजिक यथार्थ बीपीमा पाइने प्रवृत्ति हो। अराजकतावाद सिद्धान्ततः मानवतावादकै अंश र वंश हो। यसमा व्यक्ति सर्वोपरि हुन्छ। अराकतावादमा व्यक्ति विश्वको केन्द्रमा हुन्छ। यसैले त अराजकतावादीहरू राज्यमात्र हैन समाजकै पनि बन्धन स्वीकार गर्दैनन्। अर्थात्, अराजकतावादी व्यक्ति समाजवादी हुनसत्तै्कन। बीपीले भने आफू राजनीतिमा 'समाजवादी’ र साहित्यमा 'अराजकतावादी’ भएको घोषणा गरेका छन्। उनैले घोषणा गरेको र उनका अनुयायी र मित्रहरूले मानेको हुनाले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई 'समाजवादी’ भन्नुपरेको हो। नत्र राज्य, जनता, व्यक्ति र शासन प्रणालीसम्बन्धी उनका विचारलाई राम्ररी केलाउने हो भने वीपी राजनीतिमा समाजवादभन्दा अराजकतावादका निकट देखिन्छन्। लोकतन्त्र र मानवतावादमात्र उनको अभिन्न प्रवृत्ति नै हो। बीपी 'समाजवादी’ नदेखिने धेरै सन्दर्भ छन् तर सबैतिर उनी मानवतावादी छन्। साहित्य त झन् अपवाद बन्ने विषयै भएन। यसैले बीपीका सन्दर्भमा साहित्यमा अराजकतावादी हुनुको अर्थ मूलतः मानवतावादी हुनु नै हो। 'ठूलो हैन असल' हुने वादका प्रवक्ता हुन् बीपी।
बीपीले नेपाली साहित्यमा समाजभित्र पर्दाले छोपिएका विषयलाई उजागर गरेका छन्। उनले जगत्लाई पनि अलग्गै कोणबाट हेरेका छन् तर जीवनलाई हेर्ने उनको दृष्टिकोण उतिबेलाको त कुरा छाडौं अहिले पनि चकित पार्नेे गरी नयाँ छ। यसो त, प्रयोगकै लागि प्रयोग गर्ने 'प्रयोगवादी’ प्रवृत्ति बीपीले कतै पनि प्रदर्शित गरेका छैनन्। विषयवस्तु, विधा, भाषाशैली कतै पनि प्रयोगकै लागि प्रयोग गरेका छैनन्। लाग्छ, उनले जस्तो देखे, भोगे, सुने, पढे त्यसैका आधारमा संसारलाई बुझे र त्यसलाई कुनै आवरण, आडम्बरबिना आफैँ कतै भोक्ता र कतै द्रष्टा भावले प्रस्तुत भएका हुन्। शैलीमा पनि लेख्दैमा बान्की परे परिहाल्यो नत्र उनले अलंकारका लागि अभिव्यक्ति सहजतामा सम्झौता गरेका छैनन्। जसरी राजनीतिमा सत्तैका लागि उनले सम्झौता गरेनन्। उनको विशेषता मनोविश्लेषण हो तर बीपीले यदाकदा वर्णनकै माध्यमबाट पनि पात्र र कथानक प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रचलित मान्यताप्रति तर्कसम्मत सन्देह र त्यसविरुद्ध विवेकपूर्ण विचार निर्माण उदारवादी चिन्तनको सबैभन्दा पुरानो शैली र प्रवृत्ति हो। बीपीका साहित्यिक कृतिको आग्रह पन्छाएर अनुशीलन गर्ने हो मूलतः यही उदार चिन्तनको छाप भेटिन्छ। विशेषगरी उनलाई चिन्तनका दृष्टिबाट उत्तरार्धको 'मोदीआइन’ले कालजयी बनाएको छ। उनका पात्र पनि कति जीवन्त छन् भने कथाको शीर्षक र कथानक बिर्सँदा पनि पात्रहरू सम्झनामा रहन्छन्।
राजनीतिमा विफल भएर पनि राजनेता भएजस्तै साहित्यलाई आफ्नो नठान्ने र आफूलाई 'अराजकतावादी’ मान्ने बीपी यथार्थमा पनि उदार अराजकतावादी नै देखिएका छन्। बीपी नेपाली साहित्यका अराजक सम्राट् हुन्। विडम्बना, उनको यो मूल प्रवृत्तिलाई खुट्याएर त्यसकै सेरोफेरोमा विवेचना भने खासै भएको पाइँदैन।
Posted by Govinda at 9/01/2014 04:41:00 PM No comments: